बीमा कम्पनीले हकप्रद मार्फत् मात्रै पूँजी जुटाउन नपाउने, मर्जरमा जानुपर्ने ! - Laltin Media
Home»सेयर बजार»बीमा कम्पनीले हकप्रद मार्फत् मात्रै पूँजी जुटाउन नपाउने, मर्जरमा जानुपर्ने !
बीमा कम्पनीले हकप्रद मार्फत् मात्रै पूँजी जुटाउन नपाउने, मर्जरमा जानुपर्ने !
By लाल्टिन डट कम April 12, 2022 No Comments2 Mins Read
बीमा समितिले कम्पनीहरुलाई हकप्रद मार्फत मात्रै पूँजी जुटाउने गरी क्यापिटल प्लान नबनाउन अनुरोध गरेको छ । केहि बीमा कम्पनीहरुले हकप्रद मार्फत मात्रै पूँजी जुटाउने योजना पेश गरेकाले यस्तो क्यापिटल प्लानलाई समितिले स्वीकार नगर्ने बीमा समितिका अध्यक्ष सूर्य प्रसाद सिलवालले जानकारी दिए ।
उनले भने, “हामीलाई यति पूँजी नपुग भए पछि यतिसम्म तपाईहरुले राइट ल्याउन दिनु पर्यो भन्नु पर्यो । यो होइन कि पहिला एक बराबर एक हकप्रद सेयर निष्काशन गर्ने । तपाईंले राइटदेखि बाहेकका कहाँ कहाँबाट पूँजी ल्याउदै हुनुहुन्छ । पहिला त्यो ल्याउनुहोस् ।”
तर बीमा समितिका अध्यक्ष सिलावलले भने जस्तो अहिलेको अवस्थामा अधिकांश बीमा कम्पनीले बोनस सेयर दिन सक्ने अवस्था छैन । नयाँ आएका जीवन तथा निर्जीवन बीमा कम्पनीहरु सँग बोनस सेयर दिन सक्ने क्षमता नै छैन । पुराना बीमा कम्पनीहरुले पनि बोनस सेयर दिएर पूँजी बृद्धि गर्न सक्ने देखिदैन ।
समितिले सिधै एक बरारबर एकको अनुपातमा हकप्रद सेयर निष्काशन गर्न नदिने भन्नुको मतलब बीमा कम्पनीहरुले पूँजी बृद्धिको योजना पुरा गर्न मर्जरको योजना बनाउनु पर्ने देखिन्छ । खासमा बीमा समितिले अहिलेको अवस्थामा पूँजी बृद्धि योजना भन्दा पनि मर्जरको प्लान पेश गर्न अनुरोध गरेको जस्तो देखिन्छ ।
बीमा समिति स्रोतका अनुसार अहिलेको क्यापिटल प्लानले बीमा कम्पनीको संख्या घटाउनुका साथै बीमा कम्पनीको आकार बढाउने रणनीति बनाएको छ । त्यसैले एकै पटक १५० प्रतिशतले क्यापिटल बढाउन निर्देशन दिईएको हो ।
#बीमा कम्पनीले हकप्रद मार्फत् मात्रै पूँजी जुटाउन नपाउने मर्जरमा जानुपर्ने !